''ရှင်ဥပဂုတ္တ မထေရ်မြတ်ကြီး ထေရုပ္ပတ္တိတော် ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတာ အိပ်မက်မက်နေ သလိုပါပဲ'' လ?? - Yangon Media Group
ဒုတိယမြောက် စတင်ရိုက်ကူးတော့မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက ကိုယ့်အတွက် စိန်ခေါ်မှုကြီးပါတယ်လို့ မော်ဒယ်လောကကနေ သရုပ်ဆောင်လောကကို ရောက်ရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်/ သရုပ်ဆောင် လီလီကျော်ခိုင်က ပြောပါတယ်။ ”ညီမအရင်ကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားရိုက်ဖူးပါတယ်။ အခုဒီဇာတ်ကားက ဒုတိယ မြောက်ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကြီးက ညီမအတွက်တော့ စိန်ခေါ်မှုကြီးပါတယ်။ သေချာလေးပြင်ဆင်ထားတယ်။ ပါဝင်ရိုက်ကူးရတာလည်း အိပ်မက်တစ်ခုမက်နေရသလို ခံစားရပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
လီလီကျော်ခိုင်ဟာဆိုရင် ဒါရိုက်တာဝါဝါဝင်းရွှေရိုက်ကူးပုံဖော်တဲ့ ”ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်မြတ်ကြီးထေရုပ္ပတ္တိတော်”ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ”ဒီဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးဖြစ်တာကတော့ အန်တီဝါက ညီမကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကတော့ အခုစရိုက်ဖြစ်နေပါပြီ။ ကာရိုက်တာပိုင်းကတော့ ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်ကြီးရဲ့ မယ်တော်နေရာက သရုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဇာတ်ကားမှာ ရှေးခေတ်က ပုံစံတွေအတိုင်း ဝတ်စားဆင်ယင်ရမယ်။ နောက်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ညီမလေ့လာထားသ လောက်ဆိုရင် စကားပြောတာကအစ နည်းနည်းခက်တယ်။ ပိုပြီးတော့ လေ့လာဖြစ်တာကတော့ စကားပြောတဲ့ လေယူလေသိမ်းတွေ စကားလုံး တွေကို ပိုပြီးလေ့လာပြင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ အ ဝတ်အစားပိုင်းကကျတော့လည်း ပုံမှန်မြန်မာဝတ် စုံမျိုးမဟုတ်ဘဲ နန်းတွင်းခေတ်က ဝတ်ဆင်တဲ့ အဝတ်အစားမျိုးတွေကို ဝတ်ဆင်ရမယ်”လို့ ဆိုပါ တယ်။
လီလီကျော်ခိုင်က ဆက်လက်ပြီး”သရုပ်ဆောင်ပိုင်းတွေ အနေနဲ့ လုပ်ဖြစ်တာကတော့ ဒီဇာတ်ကားကတော့ ပထမဆုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်က MTV ရိုက်ဖူးတယ်။ နောက်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားနှစ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖူးပါတယ်။ ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားလည်းရိုက်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်ကားလေးမှာ သရုပ်ဆောင် ကိုပြေတီဦး၊ ကိုကျော် ရဲအောင်၊ ကိုဗေလုဝ၊ မင်းသမီးတွေက မသင်ဇာဝင့်ကျော်၊ မအေးမြတ်သူ၊ ညီမတို့ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ကာရိုက်တာကတော့ နန်း ဆန်တဲ့မိန်းကလေးတွေ အများကြီးရှိတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာက မိန်းကလေး တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။ မိမိမှာ ယခင်က အနုပညာလောကတွင် မော်ဒယ်တစ်ဦးအနေနှင့် ရပ်တည်လာခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် ဝါသနာအရ သရုပ်ဆောင်လောကသို့ ကူးပြောင်းလာခဲ့ ကြောင်းလည်း ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံးပါတီ ခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုခေါင်းဆောင်များကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ တင်ပြရန??
“အခုချိန်ထိတော့ ခေါင်းဆောင် မင်းသားအဖြစ် လာကမ်းလှမ်းတာမျိုး မရှိသေးဘူး” ထူးခြား
ကမ်းရိုးတန်း မီးပြတိုက်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ထွက်ခွာလာသည့် ?
နိုင်ငံသား အချင်းချင်း မေတ္တာတရားနှင့် လက်တွဲကာ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်၏ ဦးဆောင်မှုနှင့်အတူ
အဂတိ လိုက်စားမှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဒုတိယ ဦ